Filimka Mirzya oo noqdey kan ugu Qasaaraha Weyn Sanadkaan 2016 - iftineducation.com
iftineducation.com – Nasiib xumo weyn ayaa ku habsatay jilaaga Bollywood-ka ku cusub Harshvardhan Kapooor ee aabo u yahay Super Star Anil Kapoor.
Harshvardhan Kapooor filimkiisa cusub Mirzya bur bur taariikhi ah ayaa ku habsaday wuxuuna noqday filimka qasaaraha ugu weyn sanadkaan 2016 lagala kulmay.
Waxaa xusid mudan in Mirzya uu ka mid yahay 10-ka filim ee ugu qaalisan oo ay sanadkaan Bollywood-ka sameeyen laakiin ma ahan wax la aqbali karo in sedexdiisa maalmood ee ugu horeyso uu 5 Crore gudaha Hindiya kasoo xareeyo!
Fadlan hoos kaga bogo filimka Mirzya iy sedexdiisa maalmood ee ugu horeyso lacagaha uu gudaha Hindiya ka keenay:
Jimco – 1.75 Crore
Sabti – 1.50 Crore
Axad – 1.75 Crore
Wadarta Guud – 5 Crore (Trade Figure)
Mirzya wuxuu loolan u gali doonaa inuu kaalinta labaad kala wareego filimka Bombay Velvet oo horey u ahaa filimka labaad ee ebid qasaaraha ugu badan Bollywood-ka kala kulmaan balse weli filimka Broken Horses ayaa kaalinta kowaad kusii jiri doono.
Dhinaca kale filimka Tutak Tutak Tutiya isagana daadka ayaa qaaday madaama sedexdiisa maalmood ee ugu horeyso lacago aad u liito uu keenay.
Fadlan hoos kaga bogo filimka Tutak Tutak Tutiya ee hogaamiyaha ka yihiin Prabhudeva, Sonu Sood iyo Tammanah Bhatia lacagaha uu keenay sedexdiisa maalmood ee ugu horeesay:
Jimco – 40 Lakh
Sabti – 55 Lakh
Axad – 65 Lakh
Wadarta Guud – 1.60 Crore (Trade Figure)
Ugu dambeyntii filimka MSG – The Warrior Lion Heart isagana waa mid bur buray marka laga fiiriyo ganacsiga uu sameeyay sedexdiisa maalmood ee ugu horeesay:
Jimco – 1 Crore
Sabti – 1 Crore
Axad – 1.15 Crore
Wadarta Guud – 3.15 Crore (Trade Figure)